Faah Faahin Dagaal Beeleed Magaalada Muqdisho Ka dhacay Maanta – Djiboutination
HomeNEWS2 Faah Faahin Dagaal Beeleed Magaalada Muqdisho Ka dhacay Maanta Faah Faahin Dagaal Beeleed Magaalada Muqdisho Ka dhacay Maanta
- July 11, 2016 - in NEWS2 501 0 script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Dagaal u dhaxeeyay ciidamo kawada tirsan Dowlada Soomaaliya oo u abaabulnaa qaab beeleed ayaa maanta ka dhacay xaafada Siliga ee kutaala Magaalada Muqdisho. Sida aan Wararka ku heleyno dagaalka ayaa ka bilowday dhul la isku heestay oo guryo laga dhistay, waxaana halkaasi dagaal xoogan oo qasaaro kala duwan dhaliyay uu maanta ku dhax maray labo maleeshiyo beeleed.
Inta la xaqiijiyay labo qof oo shacab ah ayaa ku dhintay dagaalkan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay sideed qof oo kale, waxaana halkii lagu dagaalamay la wareegay mid kamid ah dhnacyadii maanta dagaalamay.
Goobjooge kusugnaa xaafada Siliga ayaa Warbaahinta u sheegay in Ciidamada dagaalamay ay ahaayeen kuwa xirnaa dareeska milatariga balse u abaabulnaa qaab beeleed, waxa uuna intaa raaciyay in dagaalka uu istaagay kadib markii mid kamid ah labada dhinac halkaasi laga saaray.’
Ciidamada hubeesan ee ku haray halka lagu dagaalamay ayaa la sheegay in ay bur buriyeen dhismayaasha laga dhisay halka la isku heestay, waxaana wali jirta cabsi laga qabo in ay mar kale dagaalamaan labada dhinac.
Maamulka Gobolka Banaadir iyo taliska booliiska ayaan wali ka hadlin dagaalkan ku saleesnaa is qab qasi dhul ee u dhaxeeyay ciidamada hubeesan, waxaana qeybo kamid ah magaalada Muqdisho horey uga dhacay dagaalo nuucaan oo kala ah.
Previous article Al Shabab attack army base, killing 10 soldiers Next article Al-Shabaab oo weerar xooggan ku qaaday Xerada Laanta Buuro About the author djibouti